China ndị ọzọ na ihe onwunwe factory na suppliers | Bornlọ ụwa
Aha ngwaahịa CAS NO. Ngwa Crosslinking gị n'ụlọnga Hyper-Methylated Amino Resin DB303 - Akụrụngwa na-emecha ； Ihe mkpuchi akwa ； General metal gwụchara ； Nnukwu ihe siri ike mechara ； Mmiri ...
Aha ngwaahịa CAS Mba. Ngwa
Crosslinking gị n'ụlọnga
Hyino-methylated Amino Resin DB303 - Akpanaka na-emecha ； Ihe mkpuchi ekike met General ọla gwụchara ； Nnukwu ihe na-emecha ； Mmiri na-emecha ； Ihe mkpuchi.
Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 Mee ka nrapado nke lacquer dị ka ihe dị iche iche, melite nguzogide mmiri, mmebi kemịkal, nguzogide okpomọkụ dị elu na nkwụsị esemokwu nke elu agba
Egbochiri Isocyanate Crosslinker KL-120 Enweghi ihe siri ike maka njirimara ionic nke mkpuchi mmiri ma nwee ike iji ya ma ọ bụ na usoro anionic ma ọ bụ usoro cationic ma ọ bụ na usoro ndị na-abụghị ionic.
Onye na-egbu mmiri Wet
Onye na-egbu mmiri OT 75 OT 75 bụ ihe dị ike, ihe na-eme ka mmiri na-agba mmiri na-arụ ọrụ nke ọma na mmiri na-agba mmiri, na-eme ka ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dịkwuo ala.
Ngwurugwu nke ethylene glycol butyl ether (ETB) 111-76-2. Isi ihe ọzọ dị na ethylene glycol butyl ether, n'ụzọ dị iche, isi dị oke ala, obere nsí, obere mmeghachi omume nke foto,
Ethylene glycol diacetate （EGDA） 111-55-7 Iji obere ma ọ bụ kpamkpam dochie Cyclohexanone, CAC, Isophorone, PMA, BCS, DBE wdg, na atụmatụ nke imeziwanye ọkwa, na-agbanwe ọsọ ọsọ.
Propylene glycol diacetate (PGDA) 623-84-7 Dị ka ihe mgbaze maka alkyd resin, acrylic resin, polyester resin, nitrocellulose resin, mmanya chloride resin, Pu gwọọ gị n'ụlọnga
Propylene Glycol Phenyl Ether (PPH) Nkọwa 6180-61-6 Ọ bụ nsị na-adịghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi iji belata agba VoC mmetụta dị ịrịba ama. Dị ka oru oma coalescent dị iche iche mmiri emulsion na dispersion coatings na gloss na ọkara-gloss agba bụ karịsịa irè.
Osote: Egbochiri Isocyanate Crosslinker KL-120